अन्ततः टुंगियो नेकपा एकता प्रकृया, आइतबार के भयो त्यस्तो चमत्कार ?
कम्युनिष्ट अनलाईन । प्रकाशित मिति : सोमवार, बैशाख ९, २०७६
काठमाडौं/ नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण र ऐतिहासिक मानिएको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छ । एक वर्षअघि केन्द्रमा एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता जिल्ला तहसम्म समेत टुंगिएको छ ।
जिल्ला तहसम्मको एकता टुंगिएपछि सोमबार लेनिन जयन्ती तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा जिल्ला नेतृत्व घोषणा हुँदैछ । पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम समेत हुँदैछन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपछि प्राप्त सुखद परिणामलाई सम्मान गर्दै दुवै पार्टी एकता प्रक्रियामा गएका हुन् । निर्वाचनअघि नै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर लामो समयसम्म एकता प्रक्रिया तल्लो कमिटीसम्म पुग्न नसकेको र पार्टी चलायमान हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको थियो ।
पार्टीभित्र रहेको गुट–उपगुटको विवाद र स्वार्थका कारण लामो समयसम्म पार्टी एकता टुंगोमा पुग्न सकेन । आईतबार दिउँसोको छलफलमा के चमत्कार भयो र एकता टुंगियो ? जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो सूत्रवद्ध रुपमा गर्ने निष्कर्षपछि सबै सहमतिमा आएका हुन् ।
आईतबारको छलफलपछि साँझ बसेको सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्ला तहका अध्यक्ष र सचिवको प्रस्ताव तयार पारी टुंगो लगाएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘लामो समयदेखि संगठनात्मक क्षेत्रमा एकता टुंगिएको थिएन, ७७ वटै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवबारे टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको सूची सोमबार सार्वजनिक हुनेछ ।’
जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम कुनै अमूक नेताको खल्तीबाट निकालिएको छैन । दुवै पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष र संयोजकलाई नेकपा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्लाको जिम्मेवारी बाँडफाँड सूत्रवद्ध रुपमा भएको छ । पूर्व एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेकै अध्यक्ष हुनेछन् भने माओवादीका संयोजक सचिव हुनेछन्, त्यस्तै माओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा माओवादीका संयोजक अध्यक्ष हुनेछन् भने एमालेका अध्यक्ष सचिव हुनेछन् । व्यक्ति र टाउको विवादभन्दा पहिल्यैदेखि सम्हालिआएको जिम्मेवारीका आधारमा जिल्ला पदाधिकारीको टुंगो लागेको छ ।
यसअघि जनप्रतिनिधि अथवा राजकीय पदमा रहेका व्यक्तिलाई जिल्लाको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने भनी सचिवालयले नै बनाएको मापदण्ड भने आईतबारको बैठकले उल्ट्याएको छ । अब पूर्व एमाले र माओवादीका अध्यक्ष र संयोजक जनप्रतिनिधि भएपनि नेतृत्व गर्न पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
जिल्ला तहमा छानिएको नेतृत्वले शीर्ष नेताका आसेपासे बन्ने र नजिक रहेर पद हत्याउने प्रवृत्ति परास्त भएको संकेत दिएको छ । पहिल्यैदेखि पार्टीको नेतृत्वमा सक्रिय रहेका र पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्ति नै एकीकृत पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा आएका छन् । अध्यक्ष र सचिव केन्द्रले टुंग्याएपनि सदस्यहरूका विषयमा यसअघि नै प्रदेश कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्रदेश कमिटीले तय गरिसकेको छ । हाल टुंगो लागेको जिल्ला कमिटीले छ महिनाभित्र जिल्लाको अधिवशेन गरी नयाँ निर्वाचित कमिटी गठन गर्ने गरी संक्रमणकालीन नेतृत्व चयन गरिएको हो । छ महिनाभित्र जिल्ला तहमै कार्यकर्ताले अधिवेशनबाट आफ्नो नेतृत्व चुन्ने छन् ।
नेकपाले ७० औं पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार राजधानीको प्रज्ञा भवनमा दिउँसो १ बजे विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रमबाटै जिल्ला तहको टुंगो लागेका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीमध्ये कसलाई कुन जिल्लाको नेतृत्व दिइयो भन्ने विषय गोप्य राखिएको छ ।
पार्टीलाई चलायमान बनाउन पोलिटब्यूरो कमिटी गठन र केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न समेत बाँकी छ । मंगलबार पुनः सचिवालय बैठक बसेर पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनबारे छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘केही दिनभित्रै पोलिटब्यूरो गठन हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सँगै केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि कार्यविभाजन हुन्छ ।’
नेकपा निकट जनसंगठनको एकता र केन्द्रीय विभागका विषयमा भने नेकपामा छलफल बाँकी छ । नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठन र ३२ केन्द्रीय विभाग छन् । त्यसमध्ये केही जनवर्गीय संगठनको मात्र एकता भएको छ । युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान लगायतको एकता हुन बाँकी रहेको छ । जनवर्गीय संगठन एकताका लागि कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई पनि आधार मानेर छुट्टै मापदण्ड बनाई प्रक्रिया थाल्ने तयारी भइरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । पार्टी एकता जिल्ला तहमा पुगेसँगै नेकपा चलायमान हुने आशा नेता कार्यकर्ताले गरेका छन् । (source: kathmandupati.com)